UDokotela Navanethem “Navi” Pillay – The Ulwazi Programme
NjengoKhomishani Ophakeme Wamalungelo Abantu,i-United Nations High Commissioner ye-Human Rights kusukela ngonyaka ka-2008-2014, uNavanethem Pillay wayenegunya emphakathini wamazwe omhlaba ukukhuthaza nokuvikela wonke amalungelo abantu.
UNavi Pillay wazalwa ngomhlaka 23 Septhemba 1941 emndenini ozithobile ngezinsuku zobandlululo futhi wakhulela endaweni yase-Clairwood eThekwini. Waya eNyuvesi yaseNatali lapho athola khona iziqu ze-BA ngo-1963 futhi i-LLB ngo-1965. KwakuseNyuvesi lapho ajoyina i-Unity Movement. Ngemuva kokuphothula iziqu zakhe waqala umsebenzi wakhe wezomthetho ngokwenza izindatshana zakhe eThekwini.
Waba ngowesifazane wokuqala ongeyena umlungu ukuqala ukusebenza kwezomthetho eNatali ngo-1968. Wavikela izishoshovu eziningi ezilwa nobandlululo futhi walwela ngempumelelo ilungelo leziboshwa zezombusazwe, kuhlanganise noNelson Mandela, zokuthola abameli. Ngo-1995, ngemuva kokuphela kobandlululo, uMandela wakhetha uPillay njengejaji lokuqala labesifazane elalingamhlophe eNkantolo eNkulu yaseNingizimu Afrika. Ungowokuqala wakuleli ukuthola iziqu zobudokotela kwezomthetho e-Harvard Law School.
Ngo-1988, uNavi Pillay wanikezwa iziqu ze-Doctor ye-Juridical Science e-Harvard Law School. Ngo-1995, ngemuva kokuphela kobandlululo, wasebenza eNkantolo Ephakeme YaseNingizimu Afrika njengejaji lesikhathi esilinganiselwe.
Ngo-1995, ngemuva kokuphela kobandlululo, uMandela wakhetha uPillay njengejaji lokuqala labesifazane elalingamhlophe eNkantolo eNkulu yaseNingizimu Afrika. Ungowokuqala wakuleli ukuthola iziqu zobudokotela kwezomthetho e-Harvard Law School.
Kusukela lapho, ubelokhu eyijaji eNkantolo Yezobugebengu Yomhlaba Wonke e-The Hague, kanye nejaji nomongameli we-International Criminal Tribunal yaseRwanda, lapho abamba khona iqhaza elibucayi enkantolo yeNkantolo ephula umthetho mayelana nokudlwengulwa njengoba ukuqothulwa kohlanga, kanye nasezindabeni zenkululeko yokukhuluma nenkulumo-ze enenzondo.
UNavi Pillay uyisibonelo esihle kubantu emphakathini wethu, abavela emiphakathini eyancishwa amathuba, abangaqhubeka ngayo benze umehluko omkhulu ezweni lonke. UPillay ungumsunguli we-South African Advice Desk ye-Women Abused.
UPillay, owathatha umhlalaphansi ngo-2014 ngemuva komsebenzi wakhe kwezomthetho othathe iminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu, ukusiphatha ukuze azigcine ematasa kakhulu, esebenza njengoKhomishani ku-International Coalition against the Death Penalty.
Cofa lapha ukufunda inhlolovo kaNavi Pillay uchaza ngeminyaka yakhe engu-50 edlule njengompetha wamalungelo abantu.
UDokotela Pillay useqhakambise izindaba eziningi zamalungelo abantu naye ake abhekana nazo, njengoba ekhule ngaphansi kombuso wobandlululo eNingizimu Afrika. Ubambe iqhaza ezinhlanganweni eziningi zamalungelo abantu. Phakathi kwezinye izindima azidlalile, ungomsenguli we- “Equality Now“, inhlangano yamalungelo abesifazane yomhlaba wonke.